2L ibva panzvimbo yekubvisa sterilization girazi Fermentor neyakagadzirwa nesimbi simbi
kushanda vhoriyamu (L): 0.4-0.7 0.6-1.4 1-2 2-3.5 2-5 4.5-7
Vessel Chombo: Girazi muviri uye isina stesheni yesimbi chivharo uye pasi
Nzira yekuvhenganisa: Mechanical agations John Crane mehendari seals servo mota
Sterilization nzira: kubva-panzvimbo sterilization Autoclavable
Mechaniki yekuisa sisitimu kumusoro kweiyo fermenter; yakakwirira-pamhepo inosimudza oar, antifoam oar; Machina emagetsi eA AC: kusingaperi kwekumhanya kusiyanisa; rpm mune iyo Fermenter: 70 ~ 1２00rpm ± 1%, Iyo kukwirira kweiyo inosimudza oar inogona kugadzirisa, zvakare.
Kumanikidza Kudzvinyirira: Kumanikidza kwemamita uye kuratidzwa kwedijiti uye dhijitari kure kutonga, Dzvinyirira bhuku remagetsi
AUTOCLAVALBE REMAHARA REMAHARA
(Stainless simbi interlayer tembiricha kudzora)
1. Yakakodzera kurimwa kwehutachiona tuvhu uye fungus
2. Isa uye tamba, nyore kushanda
3. Easy kudzidza uye kushandisa, yakaderera kukundikana mwero
4. Mushure mekuisirwa svutugadzike yakakodzera, inogona kuisirwa pakurimwa kwemhuka dzinoyamwisa nezvipembenene
5. Stainless simbi jekete uye semicircular pasi jekete, iyo yakadzamidzirwa yekushisa kuchinjana uye nhevedzano yekubatanidza Thermal baffle ine mukana wekudzora kupisa kwemvura inopisa uye inotonhora mvura pamwe nekukurumidza kupisa.
6. Matangi e1L, 2L, 3L, 5L, 7L uye 10L ekushanda anowanikwa kuti achinje matangi ekukurudzira.